Home > Articles > I am thinking about making my App stands out Should I use fancy custom fonts throughout the App ? == Hell NO !!!
I am thinking about making my App stands out Should I use fancy custom fonts throughout the App ? == Hell NO !!!
Ko Aung Pyae Phyo | 29 September, 2020
Google Font က major release တစ်ခု လုပ်လိုက်တာတွေ့တော့ app design မှာ font ရဲ့ အရေးပါပုံတစ်ချို့ကို တွေးမိတယ် ။
အဓိကအားဖြင့် major font family ကြီး ၂ ခုရှိပါတယ် ။ Serif နဲ့ San Serif ပါ ။ Serif ကတော့ character ရဲ့ အနားသတ်မှာ အတွန့်လေးတွေပါတာ ဖြစ်ပြီး San Serif ကတော့ အဲလို အတွန့်လေးတွေ မပါတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Serif family က font တွေက ပုံနှိပ်စာ (သတင်းစာ ၊ မဂ္ဂဇင်း) တွေမှာ အသုံးများပါတယ် ။ Long-term read အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်ပါတယ် ။ San Serif ကတော့ web နဲ့ app ပေါ်မှာ အသုံးများပြီး short message တွေ paragraph တွေအတွက် ပိုသင့်တော်ပါတယ် ။
Google က Android အတွက် Roborto Font family ကို Design လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာတွေ အများကြီး ရှိခဲ့တယ် ။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း Android က ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ device ပေါင်းစုံမှာ run ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီလို device range အများကြီးရဲ့ နေရာပေါင်းစုံမှာ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ပေါ်နေအောင် တော်တော်ကြိုးစားခဲ့ရတယ် ။ အဓိက ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ရတဲ့ အချက်တွေကတော့
- screen အမျိုးအစားအမျိုးမျိုး language အမျိုးမျိုးမှာ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပေါ်နေအောင်
- application ရဲ့နေရာပေါင်းစုံ (headlines, body text, smaller captions, etc) မှာ ဖတ်ရတာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ လိုအပ်တဲ့ typography hierarchy ကို ပီပီပြင်ပြင် ပုံဖော်နိုင်အောင် စသည်ဖြင့်ပေါ့ ။
အဲဒါကြောင့်လဲ Roborto Font Family မှာ typography appearance ကို ပုံစံမျိုးစုံနဲ့မြင်ရတာ ဖြစ်တယ် ။ အမျိုးအစား အကွဲတွေက weights perspective ဘက်ကဆိုရင် light, regular, medium, bold & black နဲ့ variants perspective ဘက်က ဆိုရင် condensed, slapped တို့ဖြစ်တယ် ။
App developer အနေနဲ့ mobile App တစ်ခုမှာ သုံးဖို့ Typography ကို စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလဲ အဲလို မတူညီတဲ့ screen density တွေ language တွေကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ် ။ အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ်ရွေးလိုက်တဲ့ font-family ကို screen density အမျိုးမျိုးမှာ sample အနေနဲ့ run ကြည့်ခြင်းပဲ ။
နောက်ပြီး Material Design Spec: မှာ Typography နဲ့ပတ်သတ်ပြီး weight ရော size ရော variant ရောကို pre-defined လုပ်ပေးထားတဲ့ font-theme တွေရှိတယ် ။ ကိုယ့် App အတွက် font-family နဲ့ typography hierarchy ကို စဉ်းစားတဲ့အခါ အစကနေ ကိုယ့်ဘာသာ သတ်မှတ်နေတာထက် ဒီလို pre-defined font theme တွေကိုလဲ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာ စမ်းကြည့်ရမှာ ဖြစ်တယ် ။
ဒီနေရာမှာ font-family အပြင် typography hierarchy ကို ထည့်ပြောမှ ကိုယ့် App မှာ သုံးတဲ့ font ရဲ့ size နဲ့ style ဟာ ကိုယ့် App ကို ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာအထိ reflect ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို မြင်သာမှာဖြစ်တယ် ။ အောက်က ပုံလေးကို ကြည့်ပါ ။
စနစ်တကျ သတ်မှတ်ထားတဲ့ typography hierarchy ဟာ App ရဲ့ readability နဲ့ personality အပေါ်မှာ အများကြီးသတ်ရောက်မှု ရှိတယ် ဆိုတာ မြင်သာမှာပါ ။
နောက်တစ်ခုက User ရဲ့ preferred text size ဖြစ်တယ် ။ ကိုယ့် App ရဲ့ ဘယ် content လောက်ကိုတော့ user က size ဘယ်လောက်လောက်နဲ့ ဖတ်ဖို့ လိုလားမယ် ဆိုတာကို typography နဲ့ပတ်သတ်ပြီး စဉ်းစားတဲ့ စာရင်းထဲ ထည့်ရမှာပဲ ။ ဒါဟာ ကိုယ့် App ထဲက content ရဲ့ အရေးပါမှု နဲ့ ဘယ်လောက် ကြာကြာ ဖတ်ဖို့ လိုအပ်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်တွေအပေါ်မှာလဲ မူတည်နေမှာ ဖြစ်တယ် ။ ဒီ preferred text size နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ နောက်တစ်ချက်က setting မှာ user ပြင်လိုက်မဲ့ text size ဖြစ်တယ် ။ User က text size ကို very large ထားလိုက်လို့ ကိုယ့် App တစ်ခုလုံးမှာ text တွေကြီးပဲ ကွက်ပြီး ကြီးသွားတယ် ဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုးကလဲ ကိုယ့် App UI ကြည့်ရဆိုးစေတာပဲ .. (Android N မှာတော့ ဒီလို မဟုတ်တော့ဘဲ user အနေနဲ့ အမြင်အာရုံချို့တဲ့တယ်ဆိုရင် Application တစ်ခုလုံးကို ချဲ့ကြည့်နိုင်တဲ့ Display Size ဆိုတဲ့ feature − Setting ထဲမှာ ပါလာပြီ ဖြစ်တယ်)
Font နဲ့ပတ်သတ်ပြီး နည်းနည်း detail ဆက်ပြောရရင် Font တစ်ခုုအတွက် အဓိက metrics ၆ ခုုရှိတယ် ။ အောက်က ပုံလေးကို ကြည့်လိုက်ပါ ။ တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အဓိပါယ်ကတော့ typography nerd တွေကလွဲရင် သိပ်စိတ်ဝင်စားကြမယ် မထင်ဘူး ။
ဒီပုံလေးကို ကြည့်ကြည့်ပါဦး .. ဒါက Roborto Font Family က မျိုးကွဲနေတွေနဲ့ Android မှာ ပြန်ပြီးတော့ apply လုပ်တဲ့ ပုံစံတွေပါ ။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုသတိထားစရာရှိတာက Roborto font-family ထဲက မျိုးကွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Condensed ကို သုံးတဲ့အခါမှာပါပဲ ။ Condensed ကို သုံးရင် line တစ်ကြောင်းမှာ စာများများပိုဆန့်တယ် ဆိုပေမဲ့ ဒီကောင်က ဖတ်ရတာ သိပ်အဆင်မပြေပါဘူး ။ နောက်ပြီး ဒိပြင့် font တွေနဲ့ သိပ်လိုက်လျောညီထွေ မရှိတဲ့အတွက် တစ်နေရာရာမှာ ဒီကောင့်ကို သုံးမယ် ဆိုရင် ကျန်တဲ့ screen တစ်ခုလုံးက font တွေနဲ့ harmony ကိုပါ သေသေချာချာ ထည့်စဉ်းစားပေးရပါမယ် ။ အဲဒီကောင်ကို မသုံးမဖြစ်နေရာလောက်ကလွဲရင် မသုံးတာကောင်းပါတယ် ။
နောက်ဆုံး point တစ်ခုကတော့ ကိုယ်ရွေးလိုက်တဲ့ font က ကိုယ့် App ကို user တွေ ဘယ်လို မြင်တယ် ဆိုတာကို သတ်မှတ်တယ် ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ အဲဒီ သူတို့ ဘယ်လို မြင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်က ကိုယ့် App ကို သူတို့ ဘယ်လိုပုံစံ emotionally တုံ့ပြန်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ ။ ဉပမာ အရမ်းကြီး လက်ရေးပုံစံဆန်တဲ့ font တွေဆိုရင် user အနေနဲ့ App ကို informal ကျတယ် လို့ မြင်လေ့ရှိပါတယ် (ဒါဟာ ကောင်းလား မကောင်းလား ဆိုတာကတော့ ကိုယ့် App နဲ့ nature နဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်)။ ဉပမာ ဒီပုံလေးကို ကြည့်ပါ ။
ကိုယ့် App ရဲ့ personality မှာ လျှင်လျှင်မြန်မြန် ပြုလုပ်လို့ရတယ် ဆိုတဲ့ point နဲ့ဆိုင်တာတွေ ပါနေမယ် ဆိုရင် ပထမ font လို အရမ်း heavy ဖြစ်နေတာတဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိပါဘူး ။ အဲဒီအတိုင်းပဲ ကိုယ့်App က user ရဲ့ trust နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အပိုင်းတွေ များနေမယ် (ဉပမာ banking app) ဆိုရင်လဲ ဒုတိယ font လို အရမ်း ကညော့နေတာလဲ personlity နဲ့ ကွဲလွဲနေပြန်ပါတယ် ။
Final conclusion ကတော့ ကိုယ့် App ရဲ့ branding အတွက် custom font လေးတွေ ကို branding နဲ့ ဆိုင်တဲ့နေရာလေးတွေမှာ သုံးတာ သင့်တော်တယ် ဆိုပေမဲ့ ကိုယ့် App ထဲမှာ user အတွက် ဖတ်စရာ text တွေ နဲ့ တခြား အသုံးများတဲ့ text တွေအတွက် ကိုတော့ သင့်တော်တဲ့ Roborto Font-Family တစ်ခုခုကို သုံးတာကပဲ user experience − readability နဲ့ app personality အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ် လို့ ပြောပါရစေ ။